Malunga nathi -Shenzhen anytec Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen Anytec Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-2015, iimveliso zethu ikakhulu kubandakanya abasetyhini smart isongo, GPS iwotshi smart, ukubukela kwe-ECG kunye nebluetooth ebiza iwotshi efanelekileyo njl. Umzi-mveliso wethu ujolise kwicandelo lezixhobo ezinxibekayo, inezobuchwephesha Iqela lethu kunye nomyili kunye neqela leenjineli.iinjineli zeetalente ezili-12 zilapha ukuze zisebenze kunye nawe ekuphuhliseni abafikayo, ngakumbi ezi zinemisebenzi ekhethekileyo, kubandakanya ukubiza iBluetooth kunye nemidlalo yeGPS, kunye noyilo lwefashoni. Sithatha OEM, ODM kunye SKD odolo zasekhaya nakwamanye amazwe.
Inqanaba lomgangatho wevenkile
Igumbi le-1000 elinamagumbi angenalo uthuli
Igubungela indawo ye
Isikwere se-1500 +
I-Anytec ikwaxhasa iinkampani zorhwebo, iinkampani zorhwebo ze-E, kunye nabathengisi bophawu, kunye neenkonzo ezihlanganisiweyo ze-OEM / ODM ukusuka kwinkcazo yemveliso, uyilo lwe-ID, uyilo lwezixhobo, imveliso yobuninzi, kulawulo lomgangatho kunye nokuqinisekiswa kwemveliso, Iimveliso zethu zinesatifikethi somgangatho wamazwe aphesheya, Qinisekisa kwimakethi yehlabathi ukuhlangabezana nenkonzo eyenziwe ngokwezifiso kubo bonke abasebenzisi beemveliso zethu ziveliswa ngokungqinelana ne-ISO9001 kunye ne-ISO14001 esemgangathweni kubandakanya ukuthengwa kwezinto, i-R & D, ukuveliswa, ukuhlolwa kunye nokuthengiswa, uninzi lweemveliso zethu ziyahambelana ne-CE, I-ROHS, i-FCC, isiqinisekiso se-EUIPO saseYurophu, sifikelela kwimigangatho yeLebhu ye-SGS. Ngexesha lika-2015 ukuya ku-2018 kule minyaka mithathu, siye kwimarike yokurhweba ebukelekayo, efana ne-CES, IFA, i-Indonesia enobulungisa kunye ne-HK efanelekileyo. Iimveliso zethu ezinoyilo olwahlukileyo zithandwa kakhulu ngabo bonke abathengi bamanye amazwe.
Inkampani ye-R & D ineqela elikumgangatho ophezulu we-R & D labantu abangaphezulu kwama-20,
I-80% yabo banesidanga se-bachelor okanye ngaphezulu, kwaye abasebenzi abaphambili baneminyaka engaphezu kwe-10 yamava afanelekileyo omsebenzi kunye nemvelaphi yolwazi lobungcali